iPhone itshixiwe iCloud, ngaba ivulwe? | IPhone iindaba
UMiguel Hernandez | | IPhone iindaba, iCloud, Izifundo kunye neencwadana
Ngamanye amaxesha ukuthandabuza okungunaphakade kuvela, ngaba sinako vula iCloud? Le milinganiselo yokhuseleko iApple inyanzelisa zonke izixhobo zayo ze-iOS okoko kwafika i-iOS 7 kwaye yaphucuka kakhulu nge-iOS 8, inokusibangela iingxaki ezininzi ukuba asiyazi imisebenzi yayo. Ngokomgaqo, kukusinceda ukuba singalahleki sisixhobo sakho, okanye ubuncinci sikwenze ukuba kungafikeleleki kwaphela xa kunokwenzeka ukuba basithathe ngokungekho mthethweni, nangona kunjalo, ukusisebenzisa gwenxa kunokusibangela ukuba singonwabi. T
Siza kufundisa yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-iCloud yokutshixa i-iPhone yakho, iyintoni, ungayithintela njani kwaye uyisebenzise, ​​kwaye ngaphezulu kwako konke, uyisusa njani le lock nge-iCloud kwi-iPhone. Ibalulekile khangela ukuba isixhobo asitshixwanga yi-iCloud ngaphambi kokuba uyithenge ngesandla sesibini, ke ungaphoswa leli nqaku linomdla.
Siza kuphendula kweli nqaku likhulu kuyo yonke imibuzo enokuvela nangaphezulu, kwaye ayizukuphela kokwenza uluhlu olubalulekileyo ngayo yonke into ejikeleze i-iCloud ebhloka i-iPhone, kodwa uya kuba sikwazi ukuthatha inxaxheba kwizimvo, njengesiqhelo, siya kuba lapho ukuhlangabezana neemfuno zabafundi bethu kwi-iPhone News, nge le ncwadana ibanzi kwaye ilula yomsebenzisi yokukhiya i-iCloud kunye ingakumbi ukuba ukusombulula amathandabuzo akho malunga nendlela ukuvula iCloud.
Kubaluleke kakhulu ukuba siwaqonde kakuhle la manyathelo kunye nezixhobo uApple azibeka kuthi, ukuba siyayazi indlela yokusebenzisa kakuhle yonke le misebenzi, siya kuyiguqula imeko-bume yethu ye-iOS ibe yindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo, enikezwe uthotho lwamanyathelo izakusivumela ukuba sihlalisane kunye neetekhnoloji ezintsha ngendlela elula, sisindise izoyikiso.
Kwaye ngaphezulu kwayo yonke into, kuba nabani na usengozini yokuba isixhobo sakhe sibiwe, okanye asilahle ngokudideka nje, ke kufuneka sisebenzise yonke into i-Apple ebeka ukufikelela kwethu kuyo. Kutshanje siye safunda ukuba ubusela bezixhobo ze-iOS zehle kakhulu e-United States yaseMelika okoko iApple yaphumeza le nqanaba lokhuseleko kubo.
1 IPhone itshixiwe yi-iCloud?
2 Ndiyifumana phi kwaye ndiyitshixe isixhobo sam nge-iCloud
3 Ungakuphepha njani ukuthenga i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
4 Uyazi njani ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
5 Indlela yokukhubaza iCloud yokutshixa i-iPhone
6 Ngaba i-lock ye-iCloud ingasuswa nge-jailbreak?
IPhone itshixiwe yi-iCloud?
Nangona iqonga liyi-iCloud, kuba yonke into ihamba ngelifu, inkqubo Ngokwenyani ibizwa ngokuba "Fumana i-iPhone yam yokuSebenza yokuTshixa". Nje ukuba silibale ngesixhobo sethu se-iOS, singathatha ithuba lomsebenzi we "activation lock" function in Khangela i-iPhone yam ukukhusela nabani na ongomnye ekusebenziseni izixhobo zethu ze-iOS, kubandakanya i-iPhone, nokuba ilahlekile okanye ibiwe. Nangona isixhobo se-iOS ngokuya singafikeleleki kuba phantse zonke zibandakanya itekhnoloji yeTouchID, akukubi ukuba nakho ukufumana nokuvimba isixhobo sethu ukuba kubandakanya ulwazi lomntu okanye olubuthathaka, ukhuseleko belusoloko luyinto ephambili kuApple.
Eli qhaga liyasebenza ngokuzenzekelayo nakwesiphi na isixhobo se-iOS esivela kwi-iOS 7, kwaye ayisivumeli kuphela ukuba sibambe kude isixhobo, ukongeza ekuyifumaneni, kodwa iya kuthintela ukufikelela kunye nokucinywa kwedatha enesixhobo se-iOS okanye i-iPhone ekuthethwa ngayo, ukusukela oko yayinokuyifumana, okanye buyisela kwakhona, siya kufuna ngokungagungqiyo iiparameter zokufikelela. Ke, ukuba sifuna ukubuyisela isixhobo, kufuneka sibe nomsebenzi Khangela i-iPhone yam icinyiwe, kwaye ngenxa yoku kufuneka siyazi i-ID ye-Apple edityaniswe nesixhobo. Ngokufanayo, ukuba sifuna ukuqala isixhobo esidityaniswe ne-ID ye-Apple emva kokubuyiselwa kwayo, kufuneka singenise igama eligqithisiweyo le-ID ye-Apple apho isixhobo sidityaniswe khona.
Lo msebenzi unceda ukukhusela isixhobo, ngakumbi xa ibiwe, ngokunyusa amathuba okuba siyifumane kwakhona. Siyakhumbula ukuba nokuba isixhobo sifomathiwe, sinxibelelene ngokungenakuchazwa kwi-ID ye-AppleKe ngoko, iya kulandeleka, kwaye akukho mntu uya kuba nakho ukwenza isixhobo eso ngaphandle kwemvume yakho. Obu buchwephesha abuphelelanga kwi-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch, kodwa iApple Watch nayo inesitshixo sayo sokuvula.
Ukuba ufuna yazi ukuba i-iPhone itshixiwe yi-iCloudNgokugcwalisa le fomu ilandelayo uza kufumana zonke iinkcukacha kwi-imeyile yakho, into ebalulekileyo ukunqanda ukuthenga iselfowuni eyebiweyo okanye umniniyo uyilahlile kwaye ubeke ikhiya ye-iCloud.
Ndiyifumana phi kwaye ndiyitshixe isixhobo sam nge-iCloud
Ilizwi ngokwalo lithi, iCloud sisitshixo, kwaye ukuyivimba siya kufuna kuphela uqhagamshelo lwe-intanethi, uApple usinika isixhobo esingabalulekanga, ilifu. Kuya kufuneka singene kwiwebhusayithi ye-iCloud, okoko nje sinayo Khangela iphone yam yenziwe yasebenza kunjalo, kwaye ukusuka apho, sinokufikelela kuzo zonke iindlela ezikhoyo zenkqubo yokhuseleko. Indawo yewebhu ayinakuba yenye ngaphandle kwe "www.icloud.com", apho singafumani kuphela iofisi yonke yeApple (Amaphepha, amanani kunye neKeynote), ukongeza kwi-imeyile kunye nokuvumelanisa kweefoto ngokuzenzekelayo, phakathi kweminye imisebenzi emininzi, kodwa Khangela, isixhobo esine icon efanayo ngokuchanekileyo Khangela i-iPhone yam, ke awunalahleko.
Ukungena kwi-iCloud, kwakhona, siya kufuna i-imeyile kunye negama lokugqitha eliqhagamshelwe kwi-ID ye-Apple, oko kukuthi, iakhawunti ye-Apple esidibanise ngokuthembeka kwi-iPhone yethu. Nje ukuba sicofe i icon, inkqubo iya kuphinda icele iakhawunti kwakhona, ukuqinisekisa ukuba singabanini bezixhobo ezisemthethweni eziza kusetshwa. Xa sifaka ipassword, inkqubo ithatha imizuzwana embalwa ukufumana ngokuthe ngqo ngeMephu zeApple, indawo ngqo apho isixhobo sikhona.
Apho, sifumana zonke izixhobo zethu ezidwelisiweyo, ubuncinci zonke ezo zinxulunyaniswa ne-ID yethu ye-Apple, kodwa ukuba singabalawuli beqela Kusapho ICloud, sinokufumana ezinye izixhobo zeApple ezikwelo qela. Xa sikhetha isixhobo esithile, sinokufikelela kwindawo esikuyo kwangoko, iya kubonisa ukuba ibhetri yangoku yesixhobo, kwaye iya kusivumela ukuba senze iindlela ezintathu:
Ukukhupha isandi: Ukufumana i-iPhone ukuba ilahlekile ekhaya
Qala imowudi elahlekileyo: Iya kusicela inombolo yefowuni eya kuthi ibonakaliswe ngokuzenzekelayo kwiscreen se-iPhone, ke nabani na oyifumanayo unokuyifumana kwaye ayibuyisele kuthi, ukuba bayathanda.
Cima i-iPhone: Ukuba siyoyika kwaye isixhobo sinolwazi olunobuthathaka, kuya kususwa isixhobo kude.
Ungakuphepha njani ukuthenga i-iPhone itshixiwe yi-iCloud
Xa uthenga isixhobo sesibini se-iPhone, lo mbuzo uvela ngokukhawuleza «Ndikuphepha njani ukuthengiselwa isixhobo esibiweyo, okanye sitshixiwe yi-iCloud?«Ke ngoko, kufuneka siqiniseke ukuba esi sixhobo siza kusifumana sasicinyiwe ngaphambili kwaye sasingaqhagamshelekanga kuyo nayiphi na iakhawunti ye-Apple ID ngaphambili. Oku kunokwenzeka ngenxa yezizathu ezibini, ukuba i-iPhone ibiwe, okanye ukuba umnini we-iPhone, othengisayo, akazazi izibonelelo zokutshixa kwe-iCloud kwaye khange asinxibelelanise isixhobo ngaphambili.
Okokugqibela, iApple ibeka iibhetri ngolu hlobo lwentengiselwano, kwaye ukuyiphepha, iyasebenza isixhobo sewebhu esiya kuthi sisazise ngeyona ndlela ilula ukuba isixhobo sivaliwe okanye akunjalo, okanye ubuncinci ukuba utshixe ukusebenza. Into embi kukuba esi sixhobo iye yanyamalala kwaye ngoku kufuneka usebenzise ezinye iindlela ezifana nale sicebisa ngezantsi kwaye oko kuya kukuvumela ukuba wazi ukuba kufuneka ukuvula iCloud kwi iPhone ethile:
Tshixa isixhobo sokutshekisha nge-iCloud.
Kubalulekile ukwazi imeko ye-iPhone yesibini-ngesandla esiza kuyifumana. I-iPhone, ngenxa yexabiso layo eliphakamileyo, iyimveliso ezibolekisa kakhulu kwimarike yesibini, ikwayimveliso ehlisa ixabiso elincinci kakhulu ukuba siyayithelekisa nokhuphiswano, ke intengiso izele zizixhobo ze-iPhone , Kungenxa yoko le nto kufuneka sisoyike ngokuzenzekelayo nayiphi na i-iPhone esiyifumanayo xa ithengiswa ngesandla esithe xhaxhe, xa ixabiso liphantsi kakhulu kunoko sinokukufumana kwezinye iintengiso. Ukufumana isixhobo se-iPhone esiqhagamshelwe kwenye iakhawunti ye-ID ye-Apple yinkcitho yemali, kuba ukuba iyasebenza, ngekhe sikwazi ukuthenga izicelo ezintsha, kwaye ukuba sifuna ukuyibuyisela, asisayi kuze sikwazi ukuqala yiyo. Ukongeza kwinto yokuba I-iPhone iyafumaneka ngokupheleleyo, ke sinokutya umbala omdaka osemthethweni Ukuba sifumana i-iPhone eyeyomnye umntu, yiyo loo nto kufuneka sihambe ngamehlo aliwaka ekufumaneni i-iPhone yesibini.
Nangona kunjalo, asinakuhlala sisiza apha, okanye asinalo ixesha. Ukuba siphakathi kwintengiselwano, sinokujonga ngokulula ukuba isixhobo sixhunywe kwi-ID ye-Apple, kwaye ke, ayisebenzi kwaphela kuthi buqu. Ke, sikubonisa iindlela ezimbini zokujonga ukuba ngaba i-iPhone ine-Lock yovulo okanye i-iCloud yokutshixa xa singenako ukusebenzisa indlela yokuqinisekisa ye-Apple ebesiyibonisile ngaphambili:
Indlela ye-1: Siyayicima i-iPhone kwaye siyivule kwakhona, ukuba ngaba ukuvala isikrini kuvela kwiscreen sasekhaya kwaye kusibuze ikhowudi, kungenxa yokuba i-iPhone ayicinywanga kwaye ayicofwanga kwi-ID ye-Apple ehambelana nayo.
Indlela ye-2: Ukuba sifumana i-iPhone ebuyiselweyo, kwaye ke ikwinkqubo yoqwalaselo, kufuneka siqhubele phambili kuyo, kude kube ngumzuzu xa izakusicela ngegama eligqithisiweyo le-ID ye-Apple edityaniswe kuyo, kwimeko leyo, i-iPhone idityaniswe ne-ID ye-Apple, kwaye ke, ayinakuba yeyethu.
Ke, ngokulandela ezi ndlela zimbini zilula, sinokuthintela kungekuphela nje ubuqhetseba, kodwa sikwazi nokulamla kwinkqubo yokuthengiselana ngezixhobo ezibiweyo, into engekho mthethweni kwaphela. Ukuthintela kungcono kunokunyanga, kwaye xa kuziwa kwi-iCloud iPhone locks, ayikaze ibuhlungu.
Indlela yokukhubaza iCloud yokutshixa i-iPhone
Lo mlinganiso wokhuseleko uyahambelana, oko kukuthi, sithi abagqibayo ukuba bayisebenzise okanye hayi. Kuyo yonke le nto, iApple isinika isifundo esisemgangathweni, ukuze sikwazi ukusenza singasebenzi xa sifuna.
Ukuba ubhangise iApple Watch kunye ne-iPhone yakho, ungabhangisi iApple Watch.
Yenza a yokugcina kwifowuni ye-iOS.
Chukumisa useto> iCloud. Skrolela ezantsi kwaye ucofe ukuphuma. Kwi-iOS 7 okanye ngaphambili, cofa Susa iakhawunti.
Thepha ukuphuma kwakhona, emva koko ucofe Susa kwi-iPhone kwaye ufake iphasiwedi.
Buyela kuseto kwaye ucofe Jikelele> Misela kwakhona > Cima imixholo kunye noseto. Ukuba uvule Fumana i-iPhone yam, unokufuna ukufaka i-ID yakho ye-Apple kunye negama lokugqitha.
Ukuba uceliwe ikhowudi yefowuni okanye ikhowudi yezithintelo, yifake. Emva koko cofa ukuCima [isixhobo].
Nxibelelana nomsebenzisi wakho ukukunceda udlulisele inkonzo kumnini omtsha. Ukuba awusebenzisi iSIM khadi eneceboUnokuqhagamshelana naye ukuze ufumane uncedo lokudlulisela inkonzo kumnini omtsha.
Ngaba i-lock ye-iCloud ingasuswa nge-jailbreak?
Impendulo ecacileyo nguhayiAsifuni ukwazi okanye sabelane ngolwazi olo. Ukuba ufuna nasiphi na isidingo vula iCloud Ngesixhobo esisesakho ngokusemthethweni, iApple inenkonzo yefowuni eya kuthi ijongane nokubonelela ngesisombululo esikhawulezileyo emva kokuqinisekisa isazisi kunye nelifa lakho. Ukongeza, siyakukhumbuza ukuba uninzi lweevidiyo kunye nezifundo zokwenza oko ubona kwi-intanethi ngamaqhinga alula, kwaye uya kuthi ekugqibeleni uphele ngokuchitha ixesha kunye nemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-iCloud yokutshixa i-iPhone
Ulwazi oluncinci malunga nalo ..., kuba uyayibona incwadana yemigaqo kwaye yiyo loo nto.
Ukuba xa usenza lo mbuzo undibonisa ukuba ukuvulwa kwe-iPhone kukhutshaziwe, kufuneka ndenze ntoni ukuze ndiyisebenzise?
Nceda undincede kuba i-iPhone yam itshixiwe nge-icloud kwaye andikwazi ukuvula ukuba ndinganjani?
Inomdla kakhulu kwinkcazo yakho
Ndinesandla sesibini se-iphone 4 kwaye icloud ibhlokiwe! Ukuba ndiyayivula, ngaba ishiywe ekusebenziseni njenge-ipod?
IINKCUKACHA ZIKAROMEL sitsho
KAKUHLE, NGABA IPHONE INOKUVALWA KUPHELA NGOKUQHELEKILEYO UKUBA UKUFUMANA IPHONE APP YAMI AKUSEBENZI?
Phendula ROMEL CARDENAS
Hayi, akunakwenzeka ukwenza njalo ukuba lo msebenzi awenziwanga.
Yoendy Munoz Bravo sitsho
Ndine-iPhone 6s efunyenweyo, ndenza ntoni?
Phendula uYoendy Munoz Bravo
Molo, ndithenge ii-iphone ezi-2 kumantla e-ireland zeentombi zam. Enye yayingenangxaki, kodwa enye, xa uyifomatha, ayindivumeli ukuba ndifake inkqubo yokusebenza, bandixelele ukuba ndifuna i-sim khadi kwinkampani yoqobo, eyi-EE, kodwa apha eBuenos Aires andiyiniki Awufumani nayiphi na inkampani evela kule nkampani. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingayilayisha njani inkqubo yokusebenza? ayindibuzi naliphi na igama eligqithisiweyo okanye isitshixo se-iCloud, ke ubuncinci ndiyaqinisekiswa ukuba ibingavinjwanga Ndithethile nabantu be-Iphone kwaye bandixelele ukuba ayikho kwiqela elibi. Ndifuna nje ukuyenza isebenze .... Ndikhetha ukuba ubuncinci bundikhonze ukumamela umculo kwaye ndiwusebenzise njengethebhulethi ... kulungile, intombi yam iyayithanda. Ukubulisa kunye nombulelo.
UTatiana garcia sitsho
Ndine-iPhone 5 kwaye ivaliwe yi-icloud kwaye andiyazi iphasiwedi kum bandinike yona kwaye loo mntu akayazi iphasiwedi okanye nantoni na andazi ukuba banelungiselelo lokuba bakwazi ukusebenzisa iseli intsha
Phendula Tatiana garcia
UMariela Araya Castillo sitsho
Ukuba ibhlokiwe yi-iCloud, nceda uyibuyise, mhlawumbi iya kubiwa.
Phendula uMariela Araya Castillo
Ndithenge i-iphone 6 kwi-ebay, kodwa emva kokuzama ukuyisebenzisa, bandixelela eMacservice Chile ukuba ivaliwe yi-T-mobile, akukho nkampani injalo apha, inokuvulwa ngokuyiqhekeza.
Ndiyabulela ukuba ungandithumelela ulwazi kwi-imeyile yam.
Molo ndine-iPhone 7 kunye ndiyithengile eMexico ngoku ndinayo ePeru kuyabonakala ukuba i-IDD ehambelana nayo ifunyenwe, kangangokuba andiyikhumbuli khange ndikwazi ukuyivula kodwa ndingumnikazi endithengileyo kwivenkile yeapile uncedo kwaye ukusuka kwi-ñapa ii-imeyile azifuni kundivula ngokwengingqi, kuba andikho eMexico ngunonkala omnye, yonke le nto iphone
Molweni, ndine-iPhone 5s, ndiyithengile okwethutyana kwasekuqaleni xa ndisiya kuleyo bathengisa kuyo iiselfowuni kwaye ndathi ndakubona iselfowuni yonke into ilungile kwaye ndayijonga ngeloxesha yonke into yekhamera kwaye iselfowuni yonke into ibilungile kwaye ibiyiselfowuni yokusetyenziswa kwesiqingatha kodwa emva kokuyithenga ndafika endlini yam kwaye iphone ibivaliwe kwi-icloud kwaye andinakuyenza kuba inemeyile evela kumniniyo kwaye ndingayicima njani abaninzi bandixelela ukuba ayinakucinywa kwaye ihleli njenge-ipod umntu angandixelela ukuba ndithi ukuba kunokubakho isisombululo se-icloud sokuvimba kwaye sele ndiphelelwe lithemba kakhulu kule veki ukuyivula, ndenze iinzame ezininzi zokuyivula kodwa andinakwenza nantoni ndifuna uncedo lwakho
Ndivela eMEXICO, MEXICO CITY ukuba kukho umntu ondincedayo ndingayixabisa
NguYesu Vazquez sitsho
Molo, ndiyifumene i-iPhone (ngamapolisa) ebiwe kum emini. Ewe, ngaphandle kokuba ine-invoice egameni lam, nge-imei yefowuni, isikhalazo apho ifowuni ikwabonwa yi-imei yayo. Umntu onobuchule endizama ukuvula naye i-terminal uyayiqonda kwaye andazise ukuba i-terminal yeyam yeyam. IMEYILI ABANDIPHENDULA NGAYO BAYITHI AKUFANELEKILE UKUBA YIMAYE "i-ole, i-ole kunye ne-ole".
La manenekazi avela kwi-APPLE kunye ne-ICLOUD ayilungiselele ukuze, ukuba ngasizathu sithile, isiphelo sakho sengozi kwaye kufuneka ubhenele kubo ngenkqubo esekwe, uyaqonda ukuba awusenayo ifowuni kodwa unesisindo sephepha, kwaye ukuba uyafuna buyela ukuba ne-iPhone kufuneka uphinde ungene ebhokisini.
Phendula kuYesu Vázquez
Ndithenge i-iPhone 6 kwaye yonke into isebenza kakuhle nge-sim khadi yam kunye ne-akhawunti yam id kwi-iTunes kodwa ine-akhawunti ye-icloud ehambelana nayo andikwazi ukufikelela kuyo kuba indibuza iphasiwedi kodwa engayichaphazeli ukusebenza kwefowuni, ngaphandle kwaxa uphawu oluncinci luyavela luthi ndibeka iphasiwedi yam ukuvula kodwa ukubeka "hayi ngoku" sele kulapho. Ngaba kunokwenzeka ukuba bandilandele okanye iifoto zefowuni ziboniswe kwi-icloud yeakhawunti ehambelana nayo?
Ndibiwe nje i-iPhone 8 eMexico. Ndikuxelela ukuba akunakwenzeka ukuba unqamle kwiakhawunti ye-iCloud, inye kuphela esebenzayo imowudi elahlekileyo kwaye nje ukuba ifowuni ifakwe kwiSIM okanye iqhagamshelwe kwinethiwekhi, indawo yayo iya kwamkelwa. Kwimeko yam bakhuphe iSIM yam bayifaka kwenye ifowuni ukuze bakwazi ukufikelela kunxibelelwano olugcinwe apho, ngaloo ndlela bazama ukundikhwabanisa ngamaphepha obuxoki enza ngathi avela eApple apho bacela i-ID kunye negama lokugqitha. Iintsuku ezi-7 zidlulile, kucacile ukuba sele ndiyifumene inombolo yam kwenye iSIM kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndiyaqhubeka nokufumana imiyalezo evela kumaphepha obuxoki ndizama ukufumana i-ID kunye negama lokugqitha. Ngaphandle koko sele ndifumene ii-imeyile ezininzi ezivela kuApple zithumela indawo yesixhobo, ekwidilesi yabucala kwindawo engakhuselekanga ... Ubuncinci ndiyavuya ukwazi ukuba ngekhe bakwazi ukusebenzisa ifowuni yam ebiweyo. Madoda, ukuba ngenye imini kuyenzeka kuwe, ulumke apho ubeka khona iakhawunti yakho ye-icloud…. ukusukela ekuphela kwendlela abanokuthi bavule ngayo kukuba bakwazi ukubakhohlisa ukuze babeke idatha yabo kwiphepha elingelilo.
Ifowuni enkulu yobusela sitsho
Ndibe iselfowuni, ndingayivula njani ukuze ndiyithengise ngexabiso eliphezulu? : v
Phendula umnxeba omkhulu wobusela
UJose Armando Chirinos Anaya sitsho
Molo mhlobo, ujonge njani, ndithenge i-iPhone 6 kumniniyo, ethi i-iPhone ineakhawunti ye-icloud eyintombi yakhe, umniniyo, endine-imeyile kunye negama lokugqitha, kodwa xa ndingena ndiyifumana iakhawunti ibhlokiwe ngenxa yezizathu zokhuselo apho ndingenakho ukufikelela khona kuba indicela ikhowudi ethumela kuyo i-imeyile okanye inombolo yayo kakuhle utata nentombi baneengxaki zosapho kwaye umnini akanakucela i-akhawunti ye-apula id umbuzo wam ngu; Ngaba ikhona indlela yokufaka i-iCloud yakho ngaphandle kwam ukwazi imibuzo yokhuseleko okanye i-imeyile yakho okanye ngaba ikhona indlela yokuya kumnini wenkampani ephathekayo kwaye ukhulule "urhoxe" kwi-iCloud yakho? Ngaba iya kuba nayiphi indleko? KWIPERU
Phendula ku jose armando chirinos anaya
Germán waseColombia. sitsho
Umbuliso weCordial. Madoda, abo banomdla kwezokhuseleko banomdla wokwazi ukuba kwimeko yelahleko kunokwenzeka ukuba bavule kwaye bathathe idatha yethu. Ndingumsebenzisi we-Android, ndineGlass Qaphela 5 enengcambu kwaye kuyabonakala ukuba ifowuni yayigcina idatha xa ibuyisiwe ivela kumzi-mveliso, into ebaluleke kakhulu. Ngoku ngeGlass J8 ngaphandle kotshintsho xa uyibuyisela, indibuza iakhawunti kaGoogle. Ndingathanda ukwazi ukuba iqhaga le-iCloud lithembekile na okanye hayi kuba ndiceba ukuthenga i-6S. Ndicinga ukuba ukhuseleko luyagcinwa logama nje ifowuni igcina isoftware ihlaziywa okanye ixhomekeke ngakumbi kwizixhobo zokhuselo ezongezelelweyo zedivayisi nganye kuba kutsha nje?
Phendula Jemani uvela eColombia.
Nangona i-100% yokhuseleko ingekho, iqhaga le-iCloud lithintela umntu ekubuyiseleni isixhobo sakho ngaphandle kwemvume yakho kwaye uphinde ufumane idatha yakho, abakwazanga ukuyicwangcisa kunye neyabo, kuba kuya kufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kuqala.
umhle RR sitsho
Molweni nonke, mandihlanganyele… Ndithenge ipad 2 kwaye uneakhawunti ye-icloud, kucacile ukuba ipad kufuneka ibiwe kodwa i-akhawunti ye-icloud sele ikhutshiwe kodwa andikwazi ukuyicima kwi-ipad, umbuzo wam ngowokuba ungayisusa loo nto akhawunti ngokugqibeleleyo kodwa ngeendlela ezithile ezifana nokuqhekeka kwejele ngaphandle kokuyiseta kwakhona kuba ndiyazi ukuba iya kuthintelwa enkosi kubo bonke.
Phendula kwi-sebasty RR
Baye bandithengisela i-iPhone evalwe yi-icloud kwaye andazi ukuba mandithini ngeselula.